17 Mgbe Jehova nyere ụmụ Izrel iwu ka ha ‘si na gburugburu ụlọikwuu Kora, Detan na Abaịram pụọ,’ ndị na-erubere ya isi ‘pụrụ ozugbo.’ (Ọnụ Ọgụ. 16:24, 27) Ha emeghị anya ụra ma ọ bụkwanụ gbuwe oge. Ọpụpụ ahụ ha pụrụ ozugbo gosiri na ha ji obi ha niile rubere Jehova isi. Ha achọghị ime ihe ọ bụla nwere ike ịkpasu Jehova iwe. Otú ha si rubere Jehova isi gosiri na o meghị ha obi abụọ. Ha mere ka o doo anya na ha na-akwado Jehova ma jụ ajọ omume. Gịnị ka ihe a na-akụziri anyị?
18. Gịnị mere Pọl ji gwa Timoti ka ọ “gbaara ọchịchọ a na-enwe n’oge ntorobịa ọsọ”?